ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ | MyFood Myanmar
ခေါက်ဆွဲ - Noodle Dishes | ဘဲသား - Duck | အပြုတ် - Boiled | ကြက်သား - Chicken
ဘဲသား၊ ကြက်သားကို ဆား၊ ပဲငံပြာရည်၊ Dashi၊ ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ ထုထည့် ပြုတ်ပါ။
အသားနွှာလို့ရရင် ဆယ်ထားပြီး အသားနွှာပါ။
အရိုးကို ထောင်းပြီး အရည်ဖျော် စစ်ပြီး ပြုတ်ရည်အိုးထဲ ထည့်ပါ
ဒယ်အိုးထဲ ဆီအနည်းငယ်၊ ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူထောင်း၊ ဘဲသား၊ ကြက်သား၊ ခရုဆီ၊ကြက်သားမှုန့် ထည့်ပြီးမွှေပါ။ 6.ေ
မွှေးလာလျှင် အရုိုးပြုတ်ရည်အိုး ထဲထည့်ပါ။
ကော်မှုန့်ကို ကြက်သားမှုန့် ထည့်ပြီး အရည်ဖျော်ထားပါ။
ပြုတ်အိုး ပွက်ပွက်ဆူလျှင် မွှေပြီးထည့်ပါ။
ဘဲဥ ခေါက်ထားတာကို အမျှင်ဆွဲထည့်ပေးပါ။
1. ပါဝင်ပစ္စည်း အားလုံး (၁ မှ ၄အထိ) ကိုထောင်းပါ။ 2. ပြီးလျှင်မီးကင်ထားပါ။ 3. ကျက်လျှင် သံပုရာရည် ရွှဲရွှဲညှစ်ပါ။ 4. ပန်းကန်ထဲကို ခေါက်ဆွဲ၊ပဲပင်ပေါက်၊ ၊ကန်စွန်းရွက်၊ ကော်ရည်၊ ငုံးဥ၊ကြက်သွန်ဖြူကြော်၊ တရုတ်နံနံ၊ငရုတ်ကောင်း ထည့်ပြီး အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။